China Lawn roller mpanamboatra sy mpamatsy | Ruiyi
Roller ahitra manampy anao hampitsiriritra ny mpifanila vodirindrina aminao satria manala ny fahasimbana ateraky ny biby sy ny vanim-potoana.
Ny safidy voalohany amin'ny fiara fialamboly ivelany, mety, mahasoa SY MAHOMBY. Fiarovana ny tontolo iainana.
Nosintomina tamin'ny baoritra mavesatra andraikitra ary nihodina tamin'ny bearings, dia.
Ny amponga dia manome lanja ampy ho an'ny asa sarotra mihodina indrindra, ary ny boribory kosa mitantana ny turf-nao ary mamela ny familiana mora kokoa.
Ny fonosana vovoka dia mihombo ary mahatohitra ny toetr'andro.
Easy fitehirizana: rehefa manakodia ny bozakao ianao dia esory fotsiny ary ahantona ao anaty garazy ity rouline compact ity, na maka toerana kely ilay kabine.
Maivana ary mora entina ny roller tsy misy.
Sorohy ny fahasimban'ny bozaka: ny faran'ny varingarina dia manampy amin'ny fisorohana ny fanimbana ny bozaka mandritra ny fihodinana, ary ny bara vy manify eo ambonin'ny amponga kosa miaro ny roller amin'ny fako rehefa mihodina.
Hook hook Universal: misy adiresy mavesatra eran'izao tontolo izao hametahana ny roller amin'ny mpitaingina na ny traktera
Roller ahitra dia mety amin'ny famafana ny simba ary manampy amin'ny fananganana fitomboana vaovao ho an'ny bozaka tonga lafatra sy mahasalama.
Aorian'ny famafazana dia manampy amin'ny fanafainganana ny fitsimohany ny fihodinana, amin'ny alàlan'ny fiantohana fa mifampikasoka amin'ny tany ny voa.
Mampiasà ahitra feno bozaka feno rano mba hanampiana ny sod vaovao hampiorina azy, hanala ny paosin-drivotra ary hiantohana ny fakany hifandray amin'ny tany.
Raha manimba ny ahitra anao ny biby mpikiky sy ny bibikely, a roller bozaka manampy amin'ny fanalefahana ny bozaka ho an'ny fitoviana.
Rehefa manamboatra ZARIDAINA SY bozaka, azonao atao ny mampiasa ny anay roller lalàna, ny roller lalàna antsika dia afaka manampy amin'ny fametrahana fitomboana vaovao ho tonga lafatra, bozaka mahasalama. Ny safidy voalohany amin'ny fiara fialamboly ivelany, mety, azo ampiharina ary mahomby. Fiarovana ny tontolo iainana. Alohan'ny hambolena voa vaovao, dia afaka manampy ny rozininatany tsy mitovy. Aorian'ny famafazana dia manampy amin'ny fanafainganana ny fitsimohany ny fihodinana, amin'ny alàlan'ny fiantohana fa mifampikasoka amin'ny tany ny voa. Mampiasà ahitra feno bozaka feno rano mba hanampiana ny sod vaovao hampiorina azy, hanala ny paosin-drivotra ary hiantohana ny fakany hifandray amin'ny tany. Raha manimba ny ahitra anao ny biby mpikiky sy ny bibikely, dia manampy amin'ny fanalefahana ny bozaka ho an'ny fitoviana ny rozika sy ny bibikely.
Matetika ny mpanjifa dia mitatitra fa ny fampiasana dia tsara, fandidiana tsotra, fametrahana mora ary kalitao avo lenta
Teo aloha: Fiara fialamboly ivelany